Eto ny WordPress 2.1 ... Hmmmm | Martech Zone
Talata, Janoary 23, 2007 Talata, Janoary 23, 2007 Douglas Karr
Nivoaka ny mpitsara… Hiandry olon-kafa hirona amin'ny WordPress 2.1 aho fa ity ny preliminary-ko:
Faly izy ireo nanome anarana ny sasany amin'ireo safidy amin'ny menio - blogroll dia misy dikany bebe kokoa noho ny rohy sy ny hevitra fa tsara kokoa noho ny fifanakalozan-kevitra.
Ao amin'ny OSX aho ary nanandrana mpitsikilo 3, Safari, Camino ary Firefox 2 ary tsy misy olona mamela ahy hijerena ireo sary nakariko. UPDATE: Andramo koa ny Internet Explorer 7 amin'ny Windows XP ary nanana olana mitovy amin'izany.
Ummmm… alao antoka fa tsy mandeha ny plugins alohan'ny fanavaozana. Ooops… somary somary naloto ny tranokalako nandritra ny adiny iray teo ho eo rehefa nanamboatra fanamboarana aho.
Tsy nanana plugin tokana aho izay tapaka… fa nody aho mba hampavitrika indray ny tsirairay hamerina ilay tranokala.
Toa kamo kely ny mpitantana… mety ho izaho fotsiny. Tiako ny fiasan'ny autosave !!!
Raha tsindrio Manage Uploads… efijery banga ihany koa.
Ahoana ny hevitrareo lahy? Ny tsy fahaizana mijery sy mampiditra sary dia tena hamono ahy tokoa. (Afaka mampakatra azy ireo tsy misy olana aho). Tsy manavao mpanjifa aho raha tsy henoko bebe kokoa.
OSX: ampanjifaina ny Window Window anao
Jan 23, 2007 ao amin'ny 11: 15 AM
Mijanona mandritra ny fotoana fohy monja ny fanavaozana mandra-pandrenesako bebe kokoa. Efa namaky tantara mampihoron-koditra maro momba ny plugins maro tsy mandeha intsony aho.
Jan 25, 2007 ao amin'ny 9: 25 AM
Tsy afaka miditra amin'ny Admin akory aho izao. Mila manao famafana plugin aho sao hahasoa izany.
25 Jan 2007 amin'ny 3:21 PM
Fanavaozana fotsiny… dia hita fa nisy fombafomba namboarina tao amin'ny lohahevitra nataoko izay tsy dia nandeha loatra tamin'ny fanovana ny data.